के अंतर्गत सबैभन्दा राम्रो इलेक्ट्रिक बाइकहरू | ebike Shuangye
घर ब्लग समाचार के उत्तम इलेक्ट्रिक बाइकहरू $ १००० अन्तर्गत
मिति ： २०१-2020-०08-० Categories कोटीहरू ：समाचार/ ब्लग दृश्य ： ० विचार
१००० भन्दा राम्रो इलेक्ट्रिक बाइक के हो
एक चाँडो, आरामदायक र पसिना रहित यात्रा चाहनेहरूका लागि एक इलेक्ट्रिक बाइक वास्तविक आदर्श विकल्प हुनसक्दछ, रमाईलो र रमाईलो सवारी वा आरामदायक सवारीको आनन्द लिन पनि चाहानुहुन्छ। न केवल उनीहरू इको-मैत्री, सुविधाजनक, बहुमुखी, लामो दूरीका सवारीहरूको लागि उत्तम छन्, तर, प्रायः जसो होइन, तिनीहरू जीवनमा पनि पर्याप्त लगानी हुन सक्छन्। यी बाइकहरू भीड ठाउँहरूमा सवारी गर्न सजिलो छ। तपाई कि त आफ्नो बाइक सवारी गर्न सक्नुहुन्छ प्याडलहरू प्रयोग गरेर वा मोटर प्रयोग गरेर। यसले तपाईलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। किन्नुहोस् १००० भन्दा कम इलेक्ट्रिक बाइक एक मूल्य वर्धित लगानी वस्तु बन्नेछ। विद्युतीय शक्तिले चढाएको साइकलको दायरा धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ र विद्युतीय पावर साइकलको मूल्य बिभिन्न बाइकहरूको निर्माणका लागि प्रयोग हुने सामग्रीको सुविधाहरू र गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ। शुआंगे इलेक्ट्रिक बाइक कम्पनीमा $ १००० मुनिका5वटा उत्तम इलेक्ट्रिक बाइकहरू छलफल गरौं। म आशा गर्छु कि यसले तपाईको लागि सबै भन्दा राम्रो छनौट गर्न मद्दत गर्दछ। Mountain १००० मुनि पहाडका सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक बाइकहरू के के हुन्? माउन्टेन इलेक्ट्रिक बाइक मानिसहरूका लागि साझा विकल्प हो। यसले कुनै न कुनै, असमान इलाका र मोटर पावर र गति थप्ने फाइदाको साथसाथै डिजाइन गर्दछ। र अब माउन्टेन इलेक्ट्रिक बाइक अन्य तरिकाहरूमा प्रयोग गरिएको थियो बाहिरी गतिविधिहरू मात्र होईन।
1.A6AH26 सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक माउन्टेन बाइक
यदि तपाईं दुबै आवागमन र आउटडोर व्यायामका लागि $ १००० मुनिको उत्तम इलेक्ट्रिक माउन्टेन बाइकको खोजीमा हुनुहुन्छ भने। यो उचित मूल्य हो र तपाइँको पैसाको लागि ठूलो मूल्य प्रदान गर्दछ। सब भन्दा ठूलो हाइलाइट यस इलेक्ट्रिक बाइकको उपस्थिति सामान्य बाइकको जस्तो देखिन्छ जब तपाईं यसलाई पहिलो पटक देख्नुहुन्छ क्लासिक माउन्टेन बाइक फ्रेम र लुकाइएको ब्याट्रीको डिजाईन धन्यवाद। यस बाइक सुविधा v 1000v १०ah लुकाइएको लिथियम ब्याट्रीको साथ, यसको हटाउन योग्य डिजाइनले तपाईंलाई यसलाई बाइकबाट बाहिर निकाल्न लगाउँदछ र अन्य स्थानमा चार्ज गर्दछ। पूर्ण एकल चार्जलाई 36--10 घण्टा मात्र आवश्यक पर्दछ र -०-5० किलोमिटर २6 w वाट सम्म वा 40 60० वाटको ब्रशलेस मोटरले शक्तिशाली चढाई र एक्सेलेरेशन क्षमता प्रदान गर्दछ, तपाई सजिलै २ 250 किमि प्रति घण्टाको अधिकतम वेगमा पुग्न सक्नुहुनेछ। यसबाहेक, अर्को ठूलो सुविधा डिरेलियर्सको साथ २१ स्पीड शिफ्टर हो, यसले दुबै समतल सडकहरूमा छिटो, चिल्लो र सही सवारी, साथै ठाडो इलाकाहरूमा अनुमति दिन्छ। १mm० मिमि म्याकेनिकल डिस्क ब्रेक समर्थन छोटो छ ब्रेकिंग दूरी पक्का छ भनेर थाहा पाएर तपाईं सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ, र ब्रेकले पहिलो पटक कडा ब्रेक दिनेछ। एल्युमिनियम मिश्र फ्रेमको लागि धन्यवाद, यो ई-बाइक २१ किलोग्राम तौल मात्र हो। दुई सवारी मोडहरू, पेडल असिस्टेड र ई-बाइक, अपरेशनको पाँच विभिन्न स्तरहरूको अघिल्लो प्रस्तावको साथ।
२.A2AB6 इलेक्ट्रिक माउन्टेन बाइक बिक्रीको लागि
यदि तपाईंलाई आर्थिक, किफायती र आरामदायी इलेक्ट्रिक बाइक चाहिएको छ भने, बिक्रीको लागि A6AB26 मोडेल इलेक्ट्रिक माउन्टेन बाइक तपाईंको लागि एक हो। यस बाइकमा V 36V २W० उच्च-वेग ब्रश रहित मोटर छ जसले यसलाई उत्कृष्ट पहाड चढ्ने क्षमता दिन्छ, यस बाइकको साथसाथै पहाड चढ्ने, वा केवल दैनिक यात्राको लागि प्रयोग गर्दछ। र एक 250 36v १०ah बोतल ब्याट्री संग सुसज्जित छ जसले तपाईलाई एकल चार्जमा k०km सम्मको बाइक राइड गर्न अनुमति दिन्छ, र सजिलै २ 10km / h को गतिमा पुग्न सक्छ। ब्याट्री को हटाउन योग्य डिजाइन एक काफी सुरक्षा सुविधा को रूप मा छ, यो बैटरी चार्ज गर्न इलेक्ट्रिक बाइक बाट कुञ्जी संग टिप अफ समर्थन गर्दछ, ताकि तपाईं चिन्ता छैन यो चोरी हुन सक्छ। यो २″ डिग्री चक्र कुनै पनि इलाकामा सवारीका लागि उपयुक्त छ, यो रेलमार्ग, बजरी, शहर सडक, पछाडि सडक, वा बाइक मार्गहरू। १mm० मीमी मेकानिकल फ्रन्ट र रियर डिस्क ब्रेक कुनै पनि सवारी सर्तमा राइडर सुरक्षा सुनिश्चित गर्न धेरै प्रभावकारी हुन्छ। मल्टि-फंक्शन LCD डिस्प्ले ह्याण्डलबारको बिचमा पनि फेला पर्‍यो। यसले गतिको चाल, माइलेज, ब्याट्री, मोटर पावर देखाउँदछ। बिक्रीको लागि इलेक्ट्रिक माउन्टेन बाइक 26 डब्ल्यू एलईडी फ्रन्ट लाइटको साथ पनि आउँदछ दृश्यताको लागि प्रयोगकर्ताहरू सुरक्षा राइडिंग सुनिश्चित गर्दछ। $ १००० मुनि शहरका सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक बाइकहरू के के हुन्? औसत यात्रिको लागि, शहरको ब्याट्रीबाट चल्ने साइकल वास्तविक जीवन-बचतकर्ता हुन सक्छ। इलेक्ट्रिक साइकल क्याजुअल सेटिंग्स, शहर वरिपरि सवारी आराम, वा क्याम्पसको वरिपरि तपाईंको मार्ग बनाउनको लागि हो।
3.A5AH26 शहरी सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक साइकल
यो शहरको ब्याट्री द्वारा संचालित साइकलको तातो बिक्री इलेक्ट्रिक मोटर बाइक मध्ये एक हो। सुन्दर डिजाईन, प्रयोगकर्ता-मैत्री नियंत्रण र शीर्ष-खाच मेकानिकको साथ यो एक एक सवारी गर्न को लागी एक उपचार बनाउँछ। २ inch इन्च व्हील डिजाइन पुरानो, यात्रीहरू वा कलेज विद्यार्थीहरूको लागि उपयुक्त छ। यो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक एक v 26v रिचार्जेबल लिथियम-आयन ब्याट्रीको साथ आउँदछ जुन फ्रेमको रूपमा पावर सप्लाईको रूपमा लुकाइएको छ, यो चार्ज गर्नको लागि पनि हटाइन्छ, पूर्ण एकल चार्ज समाप्त गर्न केवल 36-5 घण्टा आवश्यक पर्दछ। मोटरको २ 6० वाट वा 250 350० वाटको पावर छ, अधिकतम गतीमा २-25--30० किलोमिटर / घण्टा सजीलो सवारी हुन्छ। चाहे प्याडल असिस्टेसन मोड वा ई-बाइक मोड, यो एकदम शक्तिशाली मोटर पावरको साथ बाइक चलाउन सजिलो छ। यस ब्याट्रीबाट संचालित बाइकमा राम्रोसँग निर्मित र टिकाऊ फ्रेम छ जुन बाइकको टिकाउपन बढाउँछ। ब्रेक प्रणालीले अगाडि र पछाडिको मा १ 160० मि.मी. डिस्क ब्रेक प्रयोग गर्दछ, कडा ब्रेकि has हुन्छ जब तपाईलाई बाइक तुरुन्त रोक्नु पर्छ। इबिकले २१ वेग गति प्रसारण प्रणाली सुविधा प्रदान गर्दछ, क्रुजर इलेक्ट्रिक साइकलको लागि, यो पर्याप्त भन्दा बढि छ र १०० मिमि यात्रा यात्रा सस्पेंशन एल्युमिनियम मिश्रित फोर्क फोर्क सडकमा सवारी हुँदा ठूलो झटका अवशोषण प्रभाव प्रदान गर्दछ।
4.A5AH24 शहर मोटर साइकल बिक्री को लागी
चाहे तपाईं कामबाट घरको बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ वा केही कार्गो बोक्दै हुनुहुन्छ, यो शहर मोटर साइकल बिक्रीका लागि हो भने यसलाई सम्हाल्छ। यो साइकल इलेक्ट्रिकले कम-चरण फ्रेम डिजाइन अपनाउँछ, रेट्रो र आधुनिक लेन्ड्सलाई जोड्दछ र यो सहरी सडकमा एक सुन्दर दृश्य बन्छ। लाइटवेट एल्युमिनियम मिश्र फ्रेमको वरिपरि निर्मित, यस साइकल इलेक्ट्रिकले लामो शहर कम्युट मात्र होइन तर केही असभ्य क्षेत्रहरू पनि सामना गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। V 36v १०ah लिथियम ब्याट्री प्याडल-सहायता मोड अन्तर्गत यसलाई लामो-चिरस्थायी कल गर्न उचित छ, र केवल 10-5 घण्टा पूर्ण चार्ज समाप्त गर्नुहोस्, सवारी -०-6० किलोमिटर कुनै समस्या छैन। जुनसुकै प्याडल-सहायता मोड वा ई-बाइक मोड, २w०w ब्रश रहित मोटर सँधै २k किमि प्रति घण्टाको अधिकतम गतिको साथ बाइकमा पर्याप्त शक्ति प्रदान गर्दछ। एक मानक अगाडि V- ब्रेक र मोटर लक संग पछाडि इलेक्ट्रिक ब्रेक, र एक 250W एलईडी सामने प्रकाश कम दृश्यता मा सवारी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न। यदि तपाईंलाई २ wheel व्हील मनपर्दैन भने, त्यहाँ छनौट गर्नको लागि २-इन्च चक्र छ जुन धेरै व्यक्तिको लागि उपयुक्त छ। बिक्रीको लागि यस शहर मोटर चालित साइकल पनि वितरण भोजन सेवा को लागी एक आदर्श विकल्प हो।
A.ए १-5 फोल्डिंग ब्याट्री पावर्ड बाइक
२० ″ फोल्डि battery ब्याट्री पावर्ड बाइक सबै सहि फ्र्याक्चरहरूले सुसज्जित छ कि यसले शहरको सडकको लागि उपयुक्त बनाउँदछ। यदि तपाईं आर्थिक, सुविधा, द्रुत यात्रा, बोक्नको लागि सुविधाजनक र धेरै ठाउँ लिनुहुन्न भने, यो एक राम्रो विकल्प हो यदि तपाईं साइकल चलाउन नयाँ हुनुहुन्छ। 20W brushless मोटर धेरै चुनौतिहरूको सामना गर्न अझै राम्रो छ र एक 250V 36Ah लुकेका लिथियम ब्याट्री संग आउँछ। ब्याट्री हटाउन योग्य छ तपाईलाई दुबै लाई बाइक चार्ज गर्न विकल्प दिईएको छ। तपाईं 10km / h को शीर्ष गति पुग्न सक्नुहुनेछ, र आदर्श सर्तहरूमा यो एकल चार्जको साथ with०-25० सम्म जान सक्छ। त्यहाँ तीन सवारी मोडहरू छन् जुन तपाइँले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ - शुद्ध इलेक्ट्रिक मोड, प्याडल-सहायता मोड र सामान्य बाइक मोड। शुद्ध इलेक्ट्रिक मोड एक साथ जाने छ यदि तपाईं प्याडलिंग बिना लामो दूरीको यात्राको मजा लिन चाहानुहुन्छ। त्यहाँ PAS मोड छनौट गर्न विकल्प छ। प्याडल सहायता मोड अनुकूलित सवारी अनुभव को लागी पाँच स्तरहरु छन्। बहु-समारोह LCD प्रदर्शनले मोटर पावर, ब्याट्री क्षमता, PAS स्तर र अधिक देखाउँदछ। Speed ​​स्पीड गियरहरू र १ disc० डिस्क ब्रेक प्रणालीको साथ संयोजनले शिफ्टि bra र शक्तिशाली ब्रेकिंग सुनिश्चित गर्दछ। त्यहाँ Sh शुआंगे (होटेबाइक) उत्तम इलेक्ट्रिक बाइकहरू छन् जुन म खोज्छु जुन $ १००० अन्तर्गत छ। संक्षिप्तमा, ती सबै विचार गर्न लायक छन्, त्यसैले यदि तपाईं तिनीहरू मध्ये कुनैमा रूचि राख्नुहुन्छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा तल तपाईंको सन्देश छोड्नुहोस्। बिक्रीको लागि अधिक अन्य इलेक्ट्रिक बाइकहरू, हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् आधिकारिक वेबसाइट.
Tags:१००० भन्दा कम इलेक्ट्रिक बाइक
अघिल्लो: Reasons कारण मानिसहरूले इलेक्ट्रिक कम्यूटर बाइक रुचाउँछन्
अर्को: डुअल 750w मोटर इलेक्ट्रिक फ्याट टायर बाइक कत्तिको चाँडो जान्छ